Mixpanel: Analytics manokana, an-tarihin'ny hetsika | Martech Zone
Zoma, Aogositra 16, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Inona ny a pejy fahitana raharaha amin'ny raharaham-barotrao? Fantatrao ve? Azonao antoka ve izany? Fantatro fa indraindray mahazo fifamoivoizana iray taonina isika ary tsy maninona, ary amin'ny fotoana hafa dia mahazo fitsidihana mahafinaritra vitsivitsy izay mitarika fifandraisana lehibe amin'ny orinasa izahay. Ny teoria marketing dia ny hoe bebe kokoa no tsara kokoa ka samy manaraka ny fitarihana isika rehetra. Fa tsy maintsy manao izany ve isika?
Nanoratra momba ny azo ampiharina izahay Analytics taloha - toy Pirate Metrics ho an'ny orinasa miorina amin'ny famandrihana. Ity taranaka vaovao an'ny Analytics ny rindranasa dia tsy mandeha amin'ny refy mitovy izay niarahantsika niasa tato anatin'ny 2 taona lasa. Izy ireo dia miasa amin'ny hetsika ataon'ny mpitsidika rehefa mivezivezy amin'ny tranokalanao izy ireo.
Mixpanel dia hetsika atrehin'ny hetsika Analytics sehatra namboarina mba hamboarina amin'ny tranonkala an-tserasera, sehatra an-tranonkala na fampiharana finday.
Mixpanel no tena mandroso Analytics sehatra ho an'ny finday sy tranonkala. Raha tokony handrefesana ny fizarana pejy, dia manampy anao amin'ny famakafakana ireo fihetsika ataon'ny olona amin'ny fampiharana anao. Ny hetsika dia mety ho zavatra rehetra - misy olona mampakatra sary, milalao horonantsary, na mizara lahatsoratra, ohatra.
Ny sehatra Mixpanel dia ahafahanao manara-maso hetsika, mampifandray ireo fananana amin'ireo hetsika ireo, ary mampifandray ny angona momba ny piraofilina amin'ny olona. Eto no mitranga ny tena majia! Miaraka amin'ny napetraka amin'ny mombamomba ny mpitsidika dia azonao atao ny manivana ny atiny ho kendrenao ny mpampiasa, mandefa mailaka, manomana mailaka, mandefa hafatra an-tsoratra, ary / na manomboka ny fampandrenesana fanindriana finday.
Ary, mazava ho azy, ny hetsika farany dia ny fividianana Mixpanel maka ny fiovam-po koa.
Aug 16, 2013 amin'ny 8: 07 AM
Lahatsoratra mahafinaritra Doug! Misaotra ny fizarana! Tena informative izy io..